Mgbe ị na-eji ihe Apple ngwaọrụ, ị ga-ahụ na ọdịnaya Nwela na-akpaghị aka synced oge ọ bụla ị jikọọ ya na gị na PC. Ị ga-ahụ a ndabere gị faịlụ gị iTunes. Mgbe ụfọdụ, ị pụrụ ịhụ mkpa iji wepụ gị iTunes ndabere nke mere na ị nwere ike iweghachi otu ngwaọrụ gị.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ ndị i nwere ike wepụ gị ndabere gị iTunes, anyị na-aga depụta mkpa ụzọ na nzọụkwụ ebe a. Ebe a na-atọ nke kasị mma ngwaọrụ nke nwere ike abịa kemfe mgbe adịrị nkwado ndabere na mpaghara si iTunes.
1.Wondershare Dr.Fone N'ihi iOS
Dr. Fone maka iOS bụ nnọọ otu nke kasị mma ngwaọrụ nke i nwere ike iji n'ihi adịrị gị ndabere si iTunes. Ọ na-abịa na otutu ịtụnanya atụmatụ, ụfọdụ nke ndị dị ka ndị.
Ọ na-akwado ihe karịrị 16 faịlụ formats gụnyere kọntaktị, ozi, Kpọọ akụkọ ihe mere, Photo Stream, wdg
Ịnwere ike ihuchalu faịlụ n'ihu Iweghachi ha.
Ọ na-enyere na gwara ndị Apple ngwaọrụ nke na-rapaara na Apple logo nsogbu.
Ọ na-enyere iweghachi ngwaọrụ na-ezighị ezi os.
Iji wepụ ndabere faịlụ, ebe a bụ isi nzọụkwụ nke gị mkpa na-eso.
Ẹkedori Wondershare Dr. Fone maka iOS na PC gị.
Jikọọ gị Apple ngwaọrụ na-eche maka ihe omume na-aghọta na ngwaọrụ gị.
Pịa na 'naputa site na iTunes ndabere faịlụ' nhọrọ.
Usoro ihe omume ga na-akpaghị aka ịchọpụta niile ndabere faịlụ nke bụ ugbu na kọmputa na ọ ga-egosipụta na ndepụta.
Ego nkwado ndabere na mpaghara faịlụ nke ị chọrọ weghachi.
Ugbu a kụrụ on 'Malite iṅomi'
Chere ruo oge ụfọdụ ma ka usoro ihe omume ike iṅomi nkwado ndabere na mpaghara faịlụ.
Ihuchalu faịlụ ma họrọ ndị nke ị chọrọ naghachi.
Ị nwere ike iyo nsonaazụ site na-ahọpụta kpọmkwem edemede site n'aka ekpe n'akụkụ aka.
Pịa na 'naghachi' button na-abanye na ụzọ ebe ị chọrọ ịzọpụta ọdịnaya.
Ndị a bụ ndị dị mfe ma mfe iso nzọụkwụ nke ga-enyere gị wepụ data faịlụ na weghachite gị furu efu data. Obi abụọ adịghị, ọ bụrụ na ị na-achọ na-emefu ego ụfọdụ iji nweta a siri ike software, a ga-enwe nhọrọ kasị mma dị ka ụgwọ mbipute na-juru n'ọnụ na ndị kasị mma atụmatụ nke ị nwere ike jụọ maka.
Ọ bụ ngwá ọrụ nke na-juru n'ọnụ na ọtụtụ ezi atụmatụ. Nke a ngwa-enyocha kwa gị Apple na ngwaọrụ ma ọ pụkwara-enye gị nkọwa nke gị iTunes ndabere faịlụ nke nwere ike abịa kemfe iweghachi furu efu data kwa. The free version nwere oké na-agaghị emeli dị ka ọ pụrụ ekwe ka ị wepụ nanị ole na ole faịlụ. Iji mee ka ihe ka ọtụtụ n'ime ngwá ọrụ a, ọ na-aghọ oké mkpa iji pụọ na ugwo version.
Jikọọ gị Apple ngwaọrụ gị PC
Ẹkedori iSkysoft iPhone data mgbake
Ịhọrọ 'naputa site na iTunes ndabere' nhọrọ
Usoro ihe omume ga iṅomi ma chọpụta niile ndabere faịlụ nke bụ ugbu na PC gị na
Ị ga-enweta a ndepụta nke niile ndabere faịlụ
Họrọ ndabere nke ị chọrọ wepụ
Pịa 'Malite iṅomi'
Ị ga-ahụ ndepụta nke data faịlụ nke bụ akụkụ nke ndabere
Họrọ faịlụ nke na ị chọrọ iji weghachi na iti 'Naghachi'
Ndị a bụ ndị mfe nzọụkwụ na-eso n'ihi adịrị ndabere gị iTunes.
Nke a bụ ngwá ọrụ ọzọ nke ike-eji n'ihi adịrị gị ndabere faịlụ site na iTunes. Ọ na-akwado iOS ndabere maka iPhone, iPad na ọbụna iPod aka dị ka mma. Ya-enye gị ka iṅomi na-agagharị ọdịnaya nke gị Apple na ngwaọrụ ma ọ na-akwado a dịgasị iche iche nke dị iche iche formats dị ka mma. otu ugboro ọzọ, free ikpe awade nnọọ ụkọ atụmatụ na ga ada ijere gị mkpa. Iji Ị kpọghee ekwt kasị atụmatụ, ị ga-ahọrọ ụgwọ mbipute na e nwere ndị mma nhọrọ maka ugwo ụdị.
Lee ndị nzọụkwụ mkpa ka i soro n'ihi adịrị ndị backups.
Ẹkedori AnyTrans software na PC gị na
Jikọọ gị Apple ngwaọrụ ka PC
Ozugbo ngwaọrụ nwere a ghọtara site software, ugbu a enweta na 'Backups'.
Ị ga-ahụ ndepụta nke dị iche iche backups nke nọ gị iTunes.
Họrọ nkwado ndabere na mpaghara na ị chọrọ weghachi.
Pịa na kpọmkwem ihe nke na ị chọrọ iji weghachi dị ka ozi, kọntaktị na ndị ọzọ.
Weghachi ihe nke ị chọrọ.
Ndị a bụ ndị dị mfe nzọụkwụ nke ga-ekwe ka ị wepụ ndabere faịlụ.
Tụnyere nke atọ omume
Kwa iSkysoft AnyTrans Wondershare Dr.Fone Maka iOS
Na-eri Free version nwere ike naputa ole na ole ihe Free ikpe na-enwechaghị atụmatụ
Free ikpe na akwụ ụgwọ version na zuru ndepụta.
Speed ​​nke ime Fast Nkezi Kasị
File formats Na-akwado 12 dị iche iche nke faịlụ formats Na-akwado fọrọ nke nta niile faịlụ formats
Na-akwado ihe fọrọ nke nta nile di iche iche nke faịlụ formats
Olee otú Hichapụ iPad Documents na iTunes
> Resource> iTunes> Top 3 iTunes ndabere extractor na 2015